Brinker International yakaburitsa yakasarudzwa Q1 2022 mhedzisiro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Brinker International yakaburitsa yakasarudzwa Q1 2022 mhedzisiro
Brinker International, Inc. (NYSE: EAT) nhasi yazivisa zvakasarudzwa bhizinesi mhedzisiro yekota yekutanga yemari 2022 uye yakapa bhizinesi rekuvandudza chikamu chechipiri chemari 2022 pamberi peBrinker International Investor Day ichaitwa muna Gumiguru 20, 2021. .
"Chita chekutanga chaBrinker chakaunza kutengesa kwakanaka uye chakaramba chichiwedzera zvakanyanya indasitiri mumigwagwa," akadaro Wyman Roberts, Chief Executive Officer uye Mutungamiriri. "Asi kuwedzera kweCCIDID kutanga muna Nyamavhuvhu kwakawedzera matambudziko evashandi pamwe nezvigadzirwa uye kwakakanganisa miganho yedu nepamusoro kupfuura zvataitarisira. Isu tiri kupindura kune idzi mhepo dzeCCIDIDs nekuwedzera kutarisisa kuhaya uye kuchengetedza kuedza, uye kushanda nevatinoshanda navo kuti tiwane kumwe kudzikamiswa kwenzvimbo yekugovera cheni. Pamusoro pezvo, tatora matanho ekuwedzera mitengo, tichiwedzera tarisiro yedu yegore rose kusvika pa3% - 3.5%, kudzikamisa mitengo yekukwira kwemitengo uye kuchengetedza mariri sezvatinoenda mberi.
Mari 2022 Nzvimbo - Chekutanga Quarter
Kutengeswa kweBrinker International's Company mukota yekutanga yemari 2022 kwakawedzera kusvika pamadhora mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemazana matanhatu nemazana matanhatu kana zvichienzaniswa nemadhora mazana manomwe nemakumi maviri nesere muchikamu chekutanga chemari 859.6.
Mari yekushandisa muchikamu chekutanga chemari 2022 yakawedzera kusvika pamadhora mazana maviri nemashanu emamiriyoni kana ichienzaniswa nemadhora 25.6 miriyoni muchikamu chekutanga chemari 24.4. Mari yekushanda, sechikamu chemari yese, muchikamu chekutanga chemari 2021 yakaderera kusvika pa2022% kana ichienzaniswa 2.9% mukota yekutanga yemari 3.3.
Resitorendi inoshanda muganho, sechikamu chekutengesa kweKambani, mukota yekutanga yemari 2022 yakaderera kusvika pa10.4% kana ichienzaniswa ne11.6% mukota yekutanga yemari 2021.
Madhiraivha ekutanga ekudzikira kweRestaurant anoshanda margin aive 150 bps yemitengo yepamusoro yebasa reresitorendi uye makumi matanhatu bps emitengo yepamusoro yezvigadzirwa. Mari yebasa reresitorendi yakawedzera nekuda kwehuwandu hwemusika uye kuwedzera kwakakodzera. Kuwedzera kwechinguvana nguva yakawedzerwa uye mari yekudzidzira zvakabatsirawo pakuwedzera.
Mari inowanikwa pachikamu chakaderedzwa, paGAAP, muchikamu chekutanga chemari 2022 yakawedzera kusvika pamadhora 0.28 kana ichienzaniswa nemadhora 0.23 muchikamu chekutanga chemari 2021.
Mari inowanikwa pachikamu chakaderedzwa, kusasanganisa zvinhu zvakakosha, muchikamu chekutanga chemari 2022 yakawedzera kusvika pamadhora 0.34 kana ichienzaniswa nemadhora 0.28 muchikamu chekutanga chemari 2021.